Banyere Anyị - Axnew Ngosipụta Technology Co., Ltd.
Axnew Display Technology Co., Ltd mepụtara ya ulo oru ngosi ahịa dị ka onye ndú na ngosi technology.
Ebe ọ bụ na 2009, Axnew Display Technology Co., Ltd mepụtara ya ulo oru ngosi ahịa dị ka onye ndú na ngosi technology. Na afọ ọkachamara ahụmahụ, sales ngalaba na-enye oru nkwado na ọkachamara aro ka anyị na ndị ahịa, R & D imekọ ihe ọnụ e mgbe niile na-agbalịsi ike chepụta ma na-enye anyị na ndị ahịa ezi ihe ngwọta, anyị ekesịpde mepụtara A / D osisi na Monitors na-gafere ulo oru ule na nwetara OA , FCC, RoHS Asambodo.
Production otu nwere ọgaranya latrik na ihe onwunwe suppliers, ọtụtụ n'ime ọtụtụ uru ga-enye bụ ngwá ọrụ ga-eme ka anyị mee ihe oru oma, na-arụpụta, irè, na ọtụtụ ihe, ga-eme ka ediomi n'etiti Axnew na anyị na ndị ahịa, nke ga-eme ka anyị zuru ụwa ọnụ suppliers.
Ugbu anyị ike ogologo okwu mmekọrịta ahịa na a ulo oru ngosi akara gburugburu ụwa.
AXNEW ngosi developes anyị azụmahịa via ngosi, Alibaba, Global iyi B2B ikpo okwu ngwa ngwa ndị a years.We na-tụkwasịrị obi site ahịa na mejupụtara orginal ngwá Nsukka, akara ngwaọrụ ụlọ ọrụ, na akpaaka ngwa ọrụ si karịa 50 mba.
Anyị na-esi ọnwụ na-eji ọhụrụ na mbụ ogwe, karịsịa ulo oru ọkwa, n'ihi na anyị na Monitors na ahaziri displays.Our mụ suppliers ndị tumadi Auo, nkọ, Chimei, Boe, Samsung, LG ogwe.
Ahaziri ngwaahịa ndị anyị advantaged azụmahịa. Ahịa nwere ike ịkọrọ anyị ihe ọ bụla ihe ọmụma banyere gị echiche ka anyị na gbanwee ọkọlọtọ na ngwaahịa.
Axnew mmụọ nke na-ewu ewu na ezi ngwaahịa, credible ọrụ enyere anyị aka ime nke ọma karị.
● Industrial mezuwo monitor ngwọta
● Open etiti LCD ngwọta
● Industrial aka ileba anya ngwọta
● High Bright ngosipụta
● Touch Panel PC ngwọta
Na 2009, Axnew'main ngwaahịa bụ LCD ogwe 'trading azụmahịa na ọkọlọtọ nha nke oghe etiti Monitors.
Na 2012, Axnew nwere 3-4 technical injinia ịzụlite anyị ulo oru ọkwa Monitors. Anyị mepụtara anyị onwe anyị ulo oru njikwa osisi na mbara okpomọkụ (-25 degrees 80 degrees), na-akwado anyị ngosi na aka ike na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
Na 2014, anyị na-ewu ewu na ngwaahịa ndị pro-capacitive Monitors, ulo oru touchs na IP65 n'ihu bezel maka panel ugwu, elu brightess ngosipụta n'èzí ngwa, nke weghara gburugburu 45% -50% mbupụ olu.
Axnew ọma ike ogologo okwu mmekọrịta ahịa na a ulo oru ngosi akara gburugburu ụwa. All ngosipụta bụ na OA, FCC, RoHS nnabata.
Na 2016, Axnew gbatịrị anyị azụmahịa na gurantees anyị akwụkwọ ikike ọrụ, ụfọdụ ndị mmekọ si Germany, Canada nwere ike ime bụ isi mmezi, anyị isi mmepụta na akwụkwọ ikike ọrụ na-na China.
E wezụga, Hongkong Electronic ngosi, Taiwan Computex, Shanghai touchscreen ngosi etc ga-enyere anyị aka na-egosi anyị na-n'ụzọ doro anya. B2B n'elu ikpo okwu, n'ihi na ihe atụ Alibaba ga ka anyị ahịa ime trades mfe.
Na afọ ọkachamara ahụmahụ, anyị na-tụkwasịrị obi site ahịa na mejupụtara orginal ngwá Nsukka, akara ngwaọrụ ụlọ ọrụ, na akpaaka ngwa ọrụ si karịa 40 mba.
Ugbu a anyị na-akwadebe akpa distrubutor na Europe. Axnew ji obi na-atụ anya gị imekọ ihe ọnụ!
Anyị Axnew otu mejupụtara Overseas sales Team, Domestic sales Team, R & D Center, Financial Department, Human Resource Department, Production Factory.
Anyị na-eto eto otu, na afọ ọkachamara ahụmahụ, sales ngalaba oru na otu na-enye oru nkwado na ọkachamara aro ka anyị na ndị ahịa.
Anyị factory mejupụtara Clean ụlọ ogbako, 2 mmepụta edoghi, 1 ọkụ ụlọ, 2 n'ụlọ nkwakọba.
Ahịa onye ebere ye Axnew ga-enweta anyị ogologo okwu support e wezụga na azụmahịa.
Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị kpam kpam!
1.Once i nwere mmasị na anyị ụlọ ọrụ na ngwaahịa, biko egbula ase anyị .Usoro sales ngalaba na-enye oru nkwado na ọkachamara aro ka ị n'ime 48 awa; R & D imekọ ihe ọnụ e mgbe niile na-agbalịsi ike chepụta ma na-enye gị ezi ihe ngwọta.
2.Every iji ọbụna obere ma ọ bụ nnukwu quantities ga-n'okpuru anyị nhazi oge na usoro maka mmepụta, nke nditịm kwekọrọ Enterprise Resource Planning (ERP) nnabata.
3.Professional ọrụ nnyemaaka ga soro na ngwá ahịa gị na ọnọdụ na gị mgbe ire ọnọdụ. Anyị nwere olileanya na anyị credible ọrụ ụkpụrụ ahụ ga-ekwe ka anyị guzosie ike anyị ibe nkwado mmekọrịta.
4.For anyị iwu, anyị na-tumadi na-etinye ha n'ime akwụkwọ ikike okwu mgbe ha rutere na-aga. Mgbe ahụ, ha ga-abụ DOA na RMA ọrụ n'ime akwụkwọ ikike. Nọmalị 1 afọ akwụkwọ ikike maka ọkọlọtọ iji, anyị nwere ike ịgbatị na 2 afọ akwụkwọ ikike ma ọ bụrụ na anyị kwetara na anyị ahịa. 3 afọ akwụkwọ ikike ike-atụle ọnụ maka ụfọdụ pụrụ iche oru ngo.
Industrial njikwa osisi na mbara temperatureto akwado anyị Monitors na aka ike na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi. Anyị Monitors na-na OA-EMC, OA-LVD, FCC, RoHS nnabata.
Adress: Forth Ft, Yin Lian Tong Industrial Park, Ai Lian Zhangbei Road No.460; Long òtù District, Shenzhen China518172